ရန်ကုန် အိမ်ခြံမြေ ဈေးကွက် အလှည့်အပြောင်း ရှိလာနိုင်သလား « Burma News Group
Follow us on Twitter	Follow @BurmaNewsGroup
Naywonni offersapool of wide-ranged news for Burmese readers that include but not limit to Local, International, International relation, Business, and Sport news etc. News are also categorized into location by states and source of the news. The website is updated periodically throughout the days as news became available to provide the fast flow of information to readers. The content of the websites are also linked to the Facebook and Tweeter. သတင်းများရယူရန်ဤ အင်တာနက်စာမျက်နှာပေါ်တွင် မျှဝေပေးသော သတင်းများအား အီးမေးလ်မှတဆင့် ရယူလိုပါက အောက်ပါ အကွက်အတွင်း အီးမေးလ် လိပ်စာအား ရေးထည့်စာရင်းပေးနိုင်ပါပြီ။
အပတ်စဉ် စီးပွားရေးသတင်း အပတ်စဉ် နိုင်ငံတကာသတင်း အပတ်စဉ် ပြည်တွင်းသတင်း <!-Exchange Rate widget - HTML code - fx-rate.net --> Myanmar Kyat Exchange Rate <!-end of code-->Who's Online19 visitors online now
ရန်ကုန် အိမ်ခြံမြေ ဈေးကွက် အလှည့်အပြောင်း ရှိလာနိုင်သလား	သတင်းဌာန: မဇ္ဈိမ | June 18th, 2013 ရန်ကုန် အိမ်ခြံမြေ ဈေးကွက်အတွင်း ယခင်က မရှိခဲ့ဖူးသည့် စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများကြောင့် ပုံမှန်အနေအထားထက် အလှည့်အပြောင်း ဖြစ်လာနိုင်ချေ အတွေးတောဖွယ်ရာများ ရှိနေကြောင်း အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသူများထံမှ သိရသည်။
ရှိလာတယ်။ ဒီရက်ပိုင်း သတင်းစာတွေမှာ ကွန်ဒိုဆောက်လုပ်ဖို့ လှုပ်ရှားမှုတွေ
ရှိလာတာ တွေ့ရနိုင်ပါတယ်” ဟု မဏ္ဍိုင် အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီမှ
မန်းနေးဂျင်း ဒါရိုက်တာ ဦိးသန်းဦး က ပြောသည်။
မြေပိုင်ရှင်များမှာ တိုက်ခန်း ဆောက်လုပ်မှုများသာရှိပြီး ဆောက်လုပ်ရေး
လုပ်ကိုင်သူနှင့် တခြမ်းပေး တခြမ်းယူ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းစီ သို့မဟုတ် ၆၀-၄၀
ရာခိုင်နှုန်းစီဖြင့် ရှိခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ဆောက်လုပ်ရေးစရိတ်
စီိးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များက ရန်ကုန်မြို့တွင် မြေငှားရမ်း လုပ်ကိုင်ရန်
ကမ်းလှမ်းမှုများ ရှိနေကြောင်း အကျိုးဆောင်များက ဆိုသည်။
မြေငှားရမ်းပြီး ကွန်ဒိုဆောက်လုပ်ဖို့ ထိုင်းနဲ့ ကိုရီးယား
လုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်က ဆက်သွယ်လာ သူတွေ ရှိလာတယ်။ နိုင်ငံခြားသား
လုပ်ငန်းရှင်တွေ အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မြေဝယ်ခွင့် မရှိသေးတဲ့အတွက်
ငှားလုပ်မယ် ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ ကမ်းလှမ်းလာတာပါ” ဟု အလုံမြို့နယ်ရှိ
ကြယ်စင်လင်း အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင် လုပ်ငန်းမှ ဦးစိုးဝဏ္ဏ က ပြောသည်။
မြေကို နှစ်ရှည်ငှားပြီး ကွန်ဒိုဆောက်တာတို့၊ ဟိုတယ် ဆောက်တာတို့အတွက်
သူတို့လိုချင်တဲ့ မြေနေရာတွေက မြေပိုင်ရှင်တွေကို ဆက်သွယ်
မေးမြန်းပေးပါတယ်။ မြန်မာမြေပိုင်ရှင်တွေ အနေနဲ့ နိုင်ငံခြားသားနဲ့
စီးပွားရေးလုပ်ဖို့ သိပ် စိတ်ဝင်စားတာမျိုး မတွေ့ရပါဘူး” ဟု
ပုစွန်တောင်မြို့နယ်မှ အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင် ဦးသီဟအောင် က ဆိုသည်။
ပြည်တွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေနဲ့ တွဲပြီး ကျပ် သိန်းဂဏန်းတန်
သွားရေးလာရေး ကောင်းပြီး အကွက်ကျယ် မြေကွက်တွေမှာ လုပ်ကိုင်ဖို့
ဆွေးနွေးသူတွေလည်း ရ်ှိတယ်” ဟု ဦးစိုးဝဏ္ဏ က ပြောပြသည်။
နေရာကောင်းကောင်းတွင် နိုင်ငံခြားသားအကြိုက် အဆင့်မြင့် ကွန်ဒိုများ
တည်ဆောက် ကာ ပြန်လည်ရောင်းချရန် စီစဉ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ကွန်ဒိုဈေးကွက်မှာ ၁ ပေ ပတ်လည်ဆိုရင် ကျပ် တသိန်းခွဲ လောက်ပဲ ရှိတယ်။
နေရာကောင်းပြီး သွားရေး လာရေး ကောင်းတဲ့ နေရာမျိုးဆိုရင် ကျပ်နှစ်သိန်း
ဝန်းကျင်လောက် ပေါက်ဈေး ရှိနေတယ်။ နိုင်ငံခြားသား အကြိုက်
ကွန်ဒိုတွေဆိုရင် ၁ ပေ ပတ်လည်ကို ကျပ် နှစ်သိန်းခွဲ သုံးသိန်းလောက်နဲ့
ဈေးခေါ်ရောင်းလို့ ရနိုင်တာမျိုးပါ” ဟု ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီတခုမှ မန်နေဂျာ
ဦးကျော်ကျော် က ဆိုသည်။
မရမ်းကုန်းနဲ့ ရန်ကင်းတို့လို နေရာမျိုးတွေလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့
နောက်ထပ် ဆွေးနွေးလာတဲ့ အတွက် အချက်အလက်တွေ ထပ် စုဆောင်းနေပါတယ်။ သူတို့
လုပ်ချင်တဲ့ ပုံစံထဲမှာ နှစ် ၃၀ ငှါးရမ်းပြီး၊ ငါးနှစ်စီ ဆက်ဆက်ပြီး
လုပ်ချင်ကြတယ်။ မြန်မာမြေရှင်တွေဘက်က စိတ်ဝင်စားမှု ရှိပေမယ့် ဒီလိုမျိုး
အတွေ့အကြုံတွေ မရှိဘူး ဖြစ်နေတယ်” ဟု ကိုစိုးဝဏ္ဏ က ဆက်ပြောသည်။
ငွေ ထုပ်ပိုက်ပြီး အသံတိတ် လိုက်ဝယ်နေတဲ့ နယ်ဝယ်လက်တွေလည်း ရှိလာတယ်။
အထူးသဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ်ဘက်က လူတွေ များပါတယ်” ဟု စမ်းချောင်းမြို့နယ်
အတွင်းရှိ အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင် လုပ်ငန်းတခုမှ မန်နေဂျာ ဒေါ်စန်းစန်းအောင်
ဆက်နွယ်နေသည့် သတင်းများစတော့အိတ်ချိန်း ပေါ်ပေါက်ရန် ဂျပန်နိုင်ငံရှိ Daiwa ကုမ္ပဏီနှင့် ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ပထမအရစ် အနေဖြင့် ကျပ်ငွေ ၃၂ ဘီလျံ မ,တည်ရင်းနှီးမည်ငြိမ်းချမ်းရေးပါမစ်ဖြင့် သွင်းလာသည့် ကျပ်သိန်းသောင်းချီတန် ကားအစီးရေ ၁၀၀၀ ကျော်အတွက် အနည်းဆုံး အခွန်ငွေ ကျပ်ဘီလျံ ၂၀၀ အထိ နစ်နာအီတာလျံ-ထိုင်းကုမ္ပဏီ ရဲ့ ရေနက်ဆိပ်ကမ်းစီမံကိန်း ရပ်နားမြန်မာနိုင်ငံ၌ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပိုင်း ဆိုင်ရာများနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်နေရဆဲ ဖြစ်သောကြောင့် ဂျပန်၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည် သီလ၀ါ စက်မှုဇုန် အကောင်အထည် ဖော်နိုင်မှုအပေါ် မူတည်နေကြောင်း ဂျပန်ဒုတိယ ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ပြောကြား	Naywonni offersapool of wide-ranged news for Burmese readers that include but not limit to Local, International, International relation, Business, and Sport news etc. News are also categorized into location by states and source of the news. The website is updated periodically throughout the days as news became available to provide the fast flow of information to readers. The content of the websites are also linked to the Facebook and Tweeter. အမျိုးအစား: စီးပွားရေးသတင်း Copyright © 2013 Burma News Group - All Rights ReservedPowered by WordPress & Atahualpa